एभिन्युज टेलिभिजनप्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्य स्थिर - एभिन्युज टेलिभिजन
12 Kartik 2075 Monday 7:25 pm प्रतिकृया दिनुहोस
काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्वास्थ्य स्थिति स्थिर रहेको उनको उपचारमा संलग्न चिकित्सकले बताएका छन् । प्रा डा अरुण सायमीको संयोजकत्वमा प्रा डा दिव्यासिंह शाह तथा डा सन्तकुमार दास सम्मिलित चिकित्सक टोलीले प्रधानमन्त्रीको उपचार गरिरहेको छ । “प्रधानमन्त्रीज्यूको स्वास्थ्य परीक्षणका पछिल्ला रिपोर्ट सुधारोन्मुख छन्, सुगरको लेभल पनि स्थिर छ”, प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यस्थितिबारे आज साँझ सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिँदै प्रा डा सायमीले भने ।
चिसो बढेसँगै छातीमा समस्या देखिएको र खोकीबाट कफ निस्कन नसकेका कारण श्वासप्रश्वासमा समस्या भएकाले अस्पताल भर्ना गरिएको थियो । भर्नापछि अस्पतालले सोमबार विहान पहिलो रिर्पोट सार्वजनिक गर्दै उनको छातीमा संक्रमण हुनुका साथै शरीरमा चिनीको मात्रा असन्तुलित भएको बताएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीलाई सीसीयूमा राखेर उपचार गरिएको छ ।
मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर एन्ड ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरले विहान विज्ञप्ति जारी गर्दै अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा उत्तमकृष्ण श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्य स्थितिमा क्रमिक सुधार देखिएको र अरु स्वास्थ्य स्थिति सामान्य रहेको बताएका थिए ।
उनलाई कम्तिमा तीन दिन अस्पतालमै राख्नुपर्ने उनको उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरुले बताएका छन् । आराम गर्नका लागि निवास नपठाई अस्पतालमै राख्ने तयारी चिकित्सकहरुको छ ।
प्रधानमन्त्रीको उपचारका लागि डा. दिव्या सिंह, डा. अरुण सायमी र डा. उत्तमकृष्ण श्रेष्ठ खटिएका छन् । रुघाखोकी लागेर छातीमा संक्रमण हुनुका साथै रगतमा सुगरको मात्रा समेत बढेपछि त्यसलाई नियन्त्रणमा लिन इन्सुलिन दिइएको थियो । त्यसैगरी एन्टिबायोटिक इन्जेक्सनबाट दिइएको छ ।
डा. सायमीका अनुसार प्रधानमन्त्रीलाई लोअर रेस्पिरेटरी ट्र्याक्ट इन्फेक्सन भएको हो । यसो हुँदा छाती घ्यारघ्यार हुने, श्वास फेर्न गाह्रो हुने हुन्छ । त्यही भएर सावधानी अपनाउन अस्पताल ल्याइएको हो ।
चिकित्सक सायमिले प्रधानमन्त्रीको अवस्था सुधारोन्मुख रहेको बताउँदै तत्काल विदेश लैजानु पर्ने अवस्था नरहेको पनि जानकारी दिए । ओलीको अहिलेसम्म दुईपटक एक्स–रे, मुटुको इसिजी तथा इको, रगत परीक्षण गरिएको छ । उनको शरिरमा रहेको चिनीको मात्रा र क्रेटिनिनको मात्रा हेर्नका लागि रगत परिक्षण गरिएको हो ।
प्रधानमन्त्री ओलीलाई ब्रोड स्पेक्ट्रम एन्टिबायोटिक, स्लाइन र नेबुलाइजर दिइएको चिकित्सकहरुले जानकारी दिएका छन् । इसिजी र इको नर्मल देखिएको छ । तर अरु परीक्षणको भने अहिलेसम्म रिपोर्ट सार्वजनिक गरिएको छैन ।
उनको स्वास्थ्यबारे जानकारी लिन नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल लगायतका नेताहरु बिहानै अस्पताल पुगेका थिए । नेकपा महासचिव विष्णु पौडेल, वरिष्ठ नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा पनि अस्पताल पुगेका थिए ।
यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेट्न पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा नेता माधवकुमार नेपाल पनि अस्पताल पुगेका थिए । उनले प्रधानमन्त्री ओलीसित दोहोरो कुराकानी गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर फर्किएपछि सञ्चारकर्मीहरुसित कुरा गर्दै उनले भेटबारे सुनाए, ‘मैले कस्तो छ भनेर सोधेँ । प्रधानमन्त्रीज्युले ठीक छ, आराम गर्दैछु । केही भएको छैन भन्नुभो ।’ नेपालले प्रधानमन्त्री पत्नी राधिका शाक्य र डाक्टरहरुसँग पनि कुरा भएको र बाहिर लानु पर्ने अवस्था नरहेको बताए ।
यसअघि शुक्रबार मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट सेन्टर पुर्‍याइएका प्रधानमन्त्रीलाई अस्पतालमा नराखी घरमै आराम गर्न पठाइएको थियो । तर स्वास्थ्यमा थप समस्या देखिएपछि उनलाई त्यही अस्पतालमा भर्ना गरिएको हो । अस्पताल ल्याउनुअघि उनलाई प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा नै उपचार गरिएको थियो ।